Archdịọcese akụziela “Okwukwe” nyere oké njọ-gloria.tv
Archdịọcese Turin, Italy, ga-enye “nkụzi nke okwukwe” nyere ndị mmekọ ụdị n'ụdị n'oge ọgbakọ ezumike mgbe Lent, ka La Stampa dere (February 3).
Ọgbakọ ezumike a ga-eme na February 24/25 na monastery nke ndị Daughters of Wisdom. Fada Gianluca Carrega, onye na-ahụ maka “nlekọta ndị mmekọ ụdị n'ụdị n'aka ụkochukwu”, agọghị a ga-enye ndị mmekọ ụdị n'ụdị ahụ ụlọ mmadụ abụọ maka ịkwa iko ọjọọ n'ime monastery.
Carrega kwuru maka “ọgbakọ ezumike ahụ”, “Anyị chọrọ ịgwa ndị mmekọ ụdị n'ụdị na tozuru okwukwe.” Site n'oziọma Chukwu, "okwukwe" Carrega bụ okwukwe nyere njọ ọnwụ. Carrega na-akuzi New Testament na Theological Faculty na Turin.
Onye Fada Jesuit bụ Pino Piva ga-achịkọta ọgbakọ ezumike a. Ọ ga-ekwu maka “uru okwukwe na ịhụnanya n'anya nkụzi nke akwụkwọ nsọ.” Ụka ahụtụbeghi njikọ n'etiti mmekọ ụdị n'ụdị na ịhụnanya.
Carrega chetara n'afọ 2017 ọ natara n'aka ndị enyi ya ozi atọ ka ọ bịa agbamakwụkwọ ndị mmekọ ụdị n'ụdị ma sọọsọ otu ozi ị bịa agbamakwụkwọ nkịtị. Na May 2016 Italy tinyere iwu agbamakwụkwọ ndị mmekọ ụdị n'ụdị. Site n'olu Carrega “Iwu a butere mkpụrụ buru ibu.”
ig.news kwụrụ maka ozi a na Akwụkwọ akụkọ mmekọ ụdị n'ụdị nke Bishọp na-ewe iwe  Feb 11, 2018
37  Epr 8, 2018
30  Epr 8, 2018
31  Epr 8, 2018
23  Epr 8, 2018
35  Epr 7, 2018
34  Epr 6, 2018
25  Epr 6, 2018
32  Epr 6, 2018
35  Epr 6, 2018